IiVermonters ezikhulelweyo ziyeke ukuTshaya kunye neNkqubo yeTuba- 802Quits
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » IiVermont ezikhulelweyo
UKUHLAWULELWA NGOKUPHELELEYO UNCEDO LWAKHO NOMNTWANA WAKHO
Isizathu sakho sokuyeka ukutshaya sikhula yonke imihla.
I-1-800-QUIT-NAMHLANJE inenkqubo ekhethekileyo yoomama abatsha nabalindeleyo ukuba bayeke icuba, i-e-cigarettes okanye ezinye iimveliso zecuba. Unokuba nemibuzo malunga nezona ndlela kunye neemveliso zokukunceda uyeke ukutshaya okanye elinye icuba. Uza kusebenza nomqeqeshi oxhasayo wokuyeka ukukhulelwa ngexesha nasemva kokukhulelwa kwakho.
Le nkqubo iquka:
Iifowuni ezili-9 kunye nomQeshi wakho woQeqesho
Inkxaso yemiyalezo ebhaliweyo ifumaneka simahla
Isicwangciso sokuyeka ukuyeka
Unyango lwasimahla lweNicotine yokuNyanga ngokuyalelwa ngugqirha
Zuza amakhadi ezipho ngelixa uzama ukuyeka
Unokufumana i- $ 20 okanye i- $ 30 yekhadi lesipho kwifowuni nganye egqityiweyo yokucebisa (ukuya kuthi ga kwi-250 yeedola) ngexesha nasemva kokukhulelwa kwakho. Ngomyalelo kagqirha wakho, umQeqeshi wakho wokuKhulelwa wokuKuThumela unokukuthumela simahla ukuyeka amayeza, njengamachaphaza e-nicotine, i-gum okanye i-lozenges.
Ukuyeka ukutshaya okanye elinye icuba sesona sipho sihle onokuthi uzinike wena nosana lwakho
Ukuba ukhulelwe okanye ucinga ukukhulelwa, zininzi izibonelelo zokuyeka ukutshaya okanye elinye icuba. Ezi zibonelelo ziya kukunceda uzive ungcono kwaye udale imeko esempilweni yosana lwakho. Xa uyeka ukutshaya:
Usana lwakho lufumana ioksijini engakumbi, kwanasemva kosuku nje olunye lungatshayi
Kukho umngcipheko omncinci wokuba umntwana wakho azalwe kwangoko
Kukho ithuba elingcono lokuba umntwana wakho abuye ekhaya kunye nawe esibhedlele
Uya kuba namandla kwaye uphefumle lula
Uya kuba nemali eninzi ongayichitha kwezinye izinto ngaphandle kwecuba
Uyakuziva ulungile ngento ozenzele yona nosana lwakho
Call I-1-800-QUIT-NAMHLANJE (784-8669). Beka inombolo yeQuitline kwiselfowuni yakho ukuze uqaphele umqeqeshi xa bekufowunela kwakhona.